inqubo yokuphakelwa kwezinhlanzi zokudla okuntantayo
Ukugwema ukwahlukaniswa kwezithako zokuphakelayo ngesikhathi senqubo yokuxuba, abantu basebenzisa inqubo yokufaka izinto ezithile ukuze bandise i-gelatinization ne-digestibility yokudla ukuze izinhlanzi zikwazi ukuthola ukondliwa okuxubile ngokuphelele. Njengoba nje igama layo lisho, ukufuya izinhlanzi okudingayo kubhekisa kwinqubo yokucindezela, ukuthambisa nokubumba izithako zokuphakela kusimo sama-pellets ngaphansi kwesenzo sokushisa, umswakama kanye nengcindezi. Okuphakelayo nokukhiqizwayo okukhiqizwayo okubangelwa ukuntanta izinhlanzi pellet mill futhi i-extruder iye yaba yindlela ephambili yokudla kwezinhlanzi eziningi ngenxa yokugaya kakhulu, ukondleka okuningana nezakhiwo ezintantayo.
I-Pelleting ukucubungula ingxube yezithako zokuphakela ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme, umswakama kanye nengcindezi ephezulu ngaphakathi kwenhlanzi ebilayo ezintantayo – izinto ezingavuthiwe zicindezelwa ngokusebenzisa isikhunta esifayo. Ngokusho kokuhlangenwe nakho okuningi, umusi omncane kakhulu noma omningi kakhulu futhi okufakwayo okufakwa kwizithako bekungakhiqiza i-pellet ngekhwalithi engeyinhle ngenkathi izinga lokushisa elinganele nokuxubana okungalingani kungabulala izidalwa ezinobungozi ezingama-pathogenic ezincane ezikhona kumaphethini wokudla. Indlela eya pellet ephelele yezinhlanzi ezidinga ukudla idinga ubuchwepheshe obuphezulu bokucubungula kanye nesithuthuthu esithuthukile sokuphaka izinhlanzi kanye izinhlanzi zokudla eziphuma ngaphandle. Ngokubambisana nomkhakha wokuphakelayo ulwela njalo ukuthola ubuchwepheshe bobuchwepheshe bokuphamba kanye nomshini ukuze kuthuthukiswe amazinga wokuguqula okuphakelayo kanye nokudla kokudla kwezinhlanzi. Manje ake sixoxe ngokucubungula okuningiliziwe kwe ukwenza izinhlanzi ezidliwayo ezifuywayo.izinhlanzi zokudla okuphakeme, kufaka phakathi inqubo eyomile yokuphakelwa kwezinhlanzi nenqubo yezinhlanzi ezimanzi, ingabe inqubo ye-aqua fish feed extrusion lapho izinto ezingavuthiwe zidluliselwa phambili emgqonyeni ngokusebenzisa izikulufu futhi zicindezelwe ngokufa ekugcineni komgqomo. Inqubo ejwayelekile yokuphakelwa kwezinhlanzi ifaka izinga lokushisa eliphakeme isikhathi esifushane. Izinga lokushisa eliphakeme kune-100â „ƒ liyadingeka ukuze kufezekiswe ukunwebeka kokuphakelayo njengoba kushiya sifa. Izinga lokushisa eliphakeme endaweni eyomile etholakala ngokuqothuka kwamandla emishini kusuka endaweni efudumele efana nomugqa nendawo yesikali, noma ekhiqizwe amabutho okugunda phakathi kodonga nezinto ezibonakalayo nesikulufu nezinto ezibonakalayo
1.Ukugaya: ukuze kusheshiswe inqubo yokuxuba nokwandisa ukusetshenziswa komsoco, abantu badinga ukugaya izinto zokusetshenziswa kwezinhlanzi zidla izinhlayiya ezincane, okuhlala kudinga umshini wokuchotshoza – ama-droplet fish feed crusher. Okwamanje, osayizi bezinhlayiyana zezinto zokwakha banomphumela omuhle kusayizi wokuphakelayo nekhwalithi kwinqubo elandelayo yokufaka iziza. Sengisho nje, izinga lokugaya kwezinhlanzi eziningi zamanzi asanda kukhiwa cishe 40 mesh (420eyodwa), ngenkathi izinhlanzi izingane, kuyazungeza 60 mesh (250eyodwa).
2.Ukuxuba: inani lezinhlanzi elizondla nsuku zonke lincane, yingakho, izithako zokudla kufanele zixutshwe ngokufana ngemuva kwenqubo yokugaya ukuze uqiniseke ukuthi izinhlanzi zingathola ukondleka okuphelele kokudla kwansuku zonke. Izinga lokuxuba le-blender libaluleke kakhulu ekucutshungweni kokukhiqizwa kokuphakelayo ngoba kungathonya ikhwalithi yokuphakelwa kwezinhlanzi, ngakho-ke ukukhetha umshini wokuxuba ofanele kubaluleke kakhulu. Lapha, sincoma i-FY-500 eyakhiwe kahle eyondla i-fish feeder mixer.
3.Ukuxhuma: uma abalimi bezinhlanzi bafuna ukukhiqiza ama-pellet ama-feed ezintantayo athola ngqo imigomo yekhwalithi efanelekile ngokobukhulu, ukuqina, ubukhulu nokwakheka komsoco, kufanele bakhethe umshini wepellet wezinhlanzi zokudada ezintantayo ngokusho kwezindleko zabo zokutshala, isikali sokukhiqiza, kanye nezimpawu zokudla kanye nemikhuba yezilwane zasemanzini ezihlukile. Ummbila wethu wokudla we-pellet wezinhlanzi ezintantayo uyakwazi ukukhiqiza ama-pellets wezinhlanzi ezisezingeni eliphakeme ngezinhlanzi kanye nezilwane ezifuywayo ezinjengezinja nekati. Ngaphezu kwalokho, Akunzima ukukhiqiza ama-pellets ezinhlanzi ezintantayo ngamadayimitha ahlukene (imvamisa ukusuka ku-0.9mm kuya ku-15mm), ukuguqula nje usayizi wezinhlanzi ezintantayo zokudla ezintantayo, enikeza abalimi bezinhlanzi ukukhetha okuguqukayo okuningana ngohlobo lwezinhlanzi nesimo sokukhula.